တုန်းဟိုင် လေကြောင်းလိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှိန်းကျိန့်ပေါင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
စီချွမ် လေ‌ကြောင်းလိုင်း, Shenzhen Donggang Trade, Donghai United Group နှင့် Yonggang
တုန်းဟိုင် လေကြောင်းလိုင်း ဌာနချုပ်
တုန်းဟိုင် လေကြောင်းလိုင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှိန်းကျိန့် အခြေစိုက် လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်ပြီး ရှိန်းကျိန့် ပေါင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကို အခြေစိုက်၍ ပျံသန်းလျက်ရှိသည်။ 
၃.၂ ယခင် လေယာဉ်
ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဂျက်ဝင်း ကုန်တင် လေကြောင်းလိုင်းအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ဘိုရင်း ၇၃၇ လေယာဉ်ဖြင့် စတင်ပျံသန်းရန် မျှော်မှန်းခဲ့သည်။
၂၀၀၆ခုနှစ်ထိ လေကြောင်းလိုင်းမှ စတင်ပျံသန်းခွင့် မရှိသေးဘဲ အရှေ့ ပစိဖိတ် လေကြောင်းလိုင်း (East Pacific Airlines) အဖြစ် နာမည် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ပျံသန်းခွင့်ကို တရုတ် လေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ ၂၀၀၆ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ရရှိနိုင် မျှော်မှန်းခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှသာ ဘိုးရင်း ၇၃၇ လေယာဉ် ၃ စီးကို ခရီးသည်လေယာဉ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး စတင်ပျံသန်းနိုင်ခဲ့သည်။ 
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ အနာဂတ်စီမံကိန်းကို ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ နင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ပြည်ပခရီးစဉ်များနှင့် ခရီးရှည်များကို ပျံသန်းနိုင်ရန် နှင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် လေယာဉ် ၁၂၀ စင်းထိ ပိုင်ဆိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
ဩစတြေးလျ ‌မြောက်ပိုင်းနယ်မြေ Darwin Darwin International Airport 
တရုတ် ကွမ်တုန်း ရှိန်းကျိန့် ရှိန်းကျိန့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် Hub
တရုတ် ကျဲ့ကျန်း နင်ပေါ Ningbo Lishe International Airport
တရုတ် လျောင်းနင် တလျန် Dalian Zhoushuizi International Airport
တရုတ် ဟေးလုံကျန်း ဟာရ်ပင်း Harbin Taiping International Airport
တရုတ် Inner Mongolia Hailar Hailar Dongshan Airport
တရုတ် ကျန်းဆူး နန်ကျင်း Nanjing Lukou International Airport
တရုတ် ကျီးလင် ချောင်ချွန်း Changchun Longjia International Airport
တရုတ် ဟိုင်နန် ဟိုင်းခို Haikou Meilan International Airport
တရုတ် ယူနန် ကူမင်း ကူမင်း ချန်ဆွေ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
တရုတ် လျောင်းနင် Shenyang Shenyang Taoxian International Airport
တရုတ် ဟဲနန် ကျင့်ကျိုး Zhengzhou Xinzheng International Airport
ထိုင်း Rayong Rayong ဦးသဖောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
မြန်မာ မန္တလေး မန္တလေး မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
A Donghai Airlines Boeing 737-300F at Chengdu Airport in 2011.
၂၀၁၇ ခုနှဏ် ဩဂုတ်လအထိ တုန်းဟိုင် လေကြောင်းလိုင်းသည် ဘိုးရင်းလေယာဉ်များသာ အောက်ပါအတိုင်း အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
တုန်းဟိုင်း လေကြောင်းလိုင်း လေယာဉ်စာရင်း
Boeing 737-800 ၁၆ — ၅ ၁၅၉ ၁၆၇
Boeing 737 MAX 8 — ၂၅ TBA
Boeing 787-9 — ၅ TBA
၂၀၀၆ မှ ၂၀၁၆ ဩဂုတ်လအထိ ဘိုးရင်း ၇၃၇-၃၀၀ လေယာဉ်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
↑ "Directory: World Airlines"၊ Flight International၊ 2007-04-03၊ စာ- 74။
↑ "联系我们 Error in webarchive template: Check |url= value. Empty. ." Shenzhen Donghai Airlines. Retrieved on February 24, 2014. "Address:Shenzhen Bao’an International Airport, Shenzhen Airlines. Post code：518128" - Chinese address: "地址：深圳市宝安区宝安国际机场航站四路3009号东海航空基地 邮政编码:518128"
↑ Payload Asia Archived 29 November 2006 at the Wayback Machine. Error in webarchive template: Check |url= value. Empty. August 2006
↑ "Donghai Airlines" (November 2015). Airliner World.
↑ "From the Top End to Shenzhen: Darwin to China direct flights launched for the first time" (in en-AU)၊ ABC News၊ 2018-04-13။
↑ 2017၊ UBM (UK) Ltd.။ "Donghai Airlines plans international debut in mid-Sep 2017" (in en-GB)၊ Routesonline။
↑ Donghai Airlines adds Myanmar service from July 2018 :: Routesonline
↑ "Global Airline Guide 2017 (Part One)" . Airliner World (October 2017). Retrieved on 1 October 2017.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တုန်းဟိုင်_လေကြောင်းလိုင်း&oldid=623740" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၅:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။